Muti wezivo, naPío Baroja. Ongororo pfupi. | Zvazvino Zvinyorwa
Muti wesainzinaPío Baroja, ndeimwe yemanyorerwo ake akakurisa uye zvekare echinyakare ezvinyorwa zvemunyika. Rondedzero muenzaniso wekukosha kwekuodzwa mwoyo, inofanirwa kuverengerwa mumasangano uye nezvimwe zvakadaro. Nhasi ndinounza ongororo pfupi iye. Uye nenzira iyo isu tese tinozvirangarira.
1 Muti wesainzi
1.1 Musoro wepakati uye chimiro
1.3 Mamiriro ezvinhu
1.4 Iyo 98
Baroja akataura muzuva rake kuti ndizvo bhuku rakanakisa raakanyora. Muchokwadi, ndizvo chaizvo autobiographical nekuti anozvinyora zvinoenderana nezvaakaona uye anozvizivisa nehunhu hukuru, Andrés Hurtado.
Musoro wepakati uye chimiro
Muti wesainzi ...
Nyaya ye kuvapo kwekusaziva, inotaura hupenyu hwe Andres Hurtado, murume akarasikirwa muhupenyu husina zvahunoreva uye pakati pezviitiko zvakashata zvinomutungamira mukuora mwoyo kunoramba kuripo. Chimiro chinotenderera paari asi zvakare chinosanganisa zvinhu zvakawanda.
Is yakakamurwa kuita zvikamu zvinomwe izvo zvinowedzera 53 zvitsauko kuwedzera kwete kwenguva refu. Asi, mukati, rakakamurwa kuva 2 macircuit kana matanho yehupenyu hwaHurtado, hwakaparadzaniswa nekuzorora muchikamu chechina, kutaurirana nababamunini vake kwavanokurukura nezve dambudziko remuti weupenyu neiro resainzi.
Vaviri vekutanga zvikamu zvakakumikidzwa ku kuumbwa kwe protagonist, mhuri yake uye zvidzidzo. Mhuri inoita kuti ave mukomana akazvibvisa uye ari ega Vakoma vake uye kuomarara uye kusawirirana nababa vake kunoratidzira kwake kwekupedzisira pfungwa yehupenyu, vachiyedza kumupa chinangwa.
Mune izvo chetatu. Yavo zvidzidzo zvemishonga (saBaroja) ivo havamuzadze nechishuwo chezivo yaainayo uye, panguva imwechete, kusangana nevanorwara kunomushungurudza zvakanyanya. Uye zvinoonekwawo Lulu, mukadzi anozomukurudzira zvine simba. Kurwara uye kufa kwemunin'ina wake zvichanyatso kumuisa mu kusava nechokwadi pamberi pesainzi.
Mune yechina pane gakava ambotaurwa nababamunini vake. Uye mu yechishanu neyechitanhatu Andres akadaro zviitiko zvitsva kumaruwa (Alcolea, taundi rinobva La Mancha) uye guta, kudzoka kwake kuMadrid uye kuonekera zvakare kwaLulú. Pakupedzisira, wechinomwe, acharoora Lulu uye iye achava nerunyararo rwehukama, urwo ruchaputswa zvirokwazvo nerufu rwemwanakomana wake uye nekurambana nemukadzi wake. Uye nzira chete yekubuda ichave kuzviuraya.
Zvese zvakakosha uye kutenderera zvakapoteredza Andrés naLulú. Iyo yekupedzisira ndiyo mukadzi prototype hunhu hweBaroja iyo, pamusoro pezvose, inokoshesa kutendeseka uye kuvimbika.
Ndivo dembe baba kubva Andres; Julio Aracil, anotsoropodza uye ane hushamwari mutambi wekutamba yeYunivhesiti; Luisito, munin'ina wake diki, kana Iturrioz, sekuru vake, muzivi wedzidziso chaidzo.
Chinhu chakakosha mukuumbwa uye kusimudzira kweruzivo. Izvi Kona yaAndrés, zvaunoona kubva pahwindo rako, iyo cafes, imba yekutsemura, iyo zvipatara, nezvimwe. Iko hakuna kureba kutsanangurwa kwenzvimbo, asi sketches semuenzaniso pueblola imba, the minda yemichero, all inns, kasino, nezvimwe.
Inguva iyo mamiriro zvese zviri pamusoro mu Muti wesainzi, mavara, nharaunda, tarisiro yekusava netariro. Urombo uye misiyano pakati pehupenyu hwekumaruwa uye hwemagutala kusakwanisa, the kusafarira and the kuzvidza tsika vakafamba vakasununguka.
Izvo ndizvo izvo Baroja ainyanya kuda kuratidza mune ino ino uye, kunyanya, kuora mwoyo kwavakakonzera. Kuora mwoyo kunoratidzira njodzi inosiririsa yemutambi wayo, akabatwa nehasha dzinotyisa uye kusava netariro zvekusaziva maitiro ekugadzirisa mhinduro kana kutsvaga nzira. Kurwira kurarama uye hupenyu pachahwo, pano inoonekwa seyevanhu vese, inosara isina tsananguro kana chirevo uye, semutsara mumutambo unoenda, "zvakaratidzika kwaari sechinhu chakaipa, chine makore, chinorwadza uye chisingakundike."
Aihwa, Muti wesainzi hakusi kuverenga zvishoma yezhizha, kana yeimwe nguva yegore, asi ndiyo inomiririra zvikuru nguva yayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Muti wezivo, naPío Baroja. Ongororo pfupi.